Daniela McVicker si Martech Zone |
Edemede site na Daniela McVicker
Daniela McVicker bụ onye na-ede blọgụ na onye edemede na-enweghị akwụkwọ na-arụ ọrụ nke ọma na ụlọ ọrụ B2B na B2C na-enye ederede blog, ederede ederede, na ọrụ ederede. Ugbu a, ọ na-enye aka Ndepụta ederede. Mgbe Daniela anaghị ede ihe, ọ na-enwe mmasị ịga njem, ịgụ akụkọ ọdịnala na akụkọ sayensị, ma nwaa mmanya ọhụrụ.
Kedu ihe bụ B2C CRM kacha mma maka obere azụmaahịa gị?
Mmekọrịta ndị ahịa abịawo ogologo oge kemgbe mmalite ha. Echiche nke Business2Consumer agbanweela gaa na UX-centric echiche karịa ịnyefe ngwaahịa ikpeazụ. Họrọ ezigbo njikwa mmekọrịta ndị ahịa maka azụmaahịa gị nwere ike ịbụ aghụghọ.